Sidina bebe kokoa mankany Bonaire avy any Etazonia amin'ny Delta, American ary United izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Sidina bebe kokoa mankany Bonaire avy any Etazonia amin'ny Delta, American ary United izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Tourism Corporation Bonaire (TCB) dia manambara ny fandaharam-potoanan'ny sidina avy amin'ny American Airlines, Delta Air Lines, ary United Airlines mandritra ny volana ho avy.
Samy mahita fironana tsara sy fangatahana famandrihana ho an'ny nosy ny Delta Air Lines sy ny American Airlines.
United Airlines dia hanohy ny sidina mankany Bonaire avy any Houston sy Newark amin'ny volana Novambra.
Ny Nosy Bonaire Karaiba holandey dia miarahaba ny fiverenan'ireo sidina mpandeha ara-barotra avy any Etazonia.
Taorian'ny fahombiazan'ny fandefasana indray ny sidina avy any Etazonia tamin'ny volana Jona nankany amin'ny nosy Caribbean Caribbean any Bonaire, ny Tourism Corporation Bonaire (TCB) dia manambara ny fandaharam-potoanan'ny sidina avy amin'ny American Airlines, Delta Air Lines, ary United Airlines mandritra ny volana ho avy.
Ao anatin'ny drafitra fanarenana fizahan-tany, Tourism Corporation Bonaire dia hitohy amin'ireo ezaka ireo mba hahitana hatrany ny fitomboan'ny mpitsidika ny nosy, ary ny toekarena eo an-toerana.
samy Delta Air-dalana,, ary ny American Airlines dia mahita fironana tsara, ary mametraka ny fangatahana ho an'ny nosy. Noho izany, ity dia fotoana mety hampiakarana ny isan'ny sidina mankany Bonaire.
Amin'izao fotoana izao hatramin'ny 20 Novambra 2021; Delta dia manana sidina sabotsy isan-kerinandro kasaina ho any Bonaire avy any Atlanta, Georgia, ary ity sidina isan-kerinandro ity dia hitombo sidina roa isan-kerinandro amin'ny Alarobia sy Sabotsy eo anelanelan'ny 24 Novambra 2021 -Desambra 15, 2021. Avy eo manomboka amin'ny 18 Desambra 2021 ka hatramin'ny 4 Janoary, 2022 dia hisy sidina isan'andro afa-tsy ny talata. Manomboka amin'ny 5 janoary 2022 ka hatramin'ny 9 aprily 2022 dia misy sidina alatsinainy, alarobia, zoma ary asabotsy.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina amerikana amin'izao fotoana izao hatramin'ny 6 Novambra 2021 dia sidina roa isan-kerinandro amin'ny Alarobia sy Sabotsy avy any Miami, Florida. Manomboka amin'ny Novambra, 2021 ka hatramin'ny 3 Janoary 2022 ny sidina Alatsinainy dia ho ampiana amin'ny zotram-pitaterana. Ary hisy ihany koa sidina isan'andro mankany Bonaire mandritra ny fialantsasatra, manomboka ny 16 Desambra 2021 ka hatramin'ny 3 Janoary 2022.
Amin'ny 6 Novambra 2021, ny United Airlines dia manohy ny sidina avy any Houston, Texas miaraka amin'ny sidina isan-kerinandro mankany Bonaire amin'ny asabotsy miaraka amin'ny sidina fiverenana ny alahady, ary ny sidina sabotsy isan-kerinandro avy any Newark, New Jersey.
Sidina avy any Almaty mankany New Delhi amin'ny Air Astana izao
Smart TV dia manolotra fomba vaovao mpamokatra sarimihetsika
Sidina New Calgary mankany Seattle amin'ny WestJet izao
Nanokatra indray ny sisintany i Aostralia taorian'ny 18 volana nisian'ny COVID...
Hotel Business and Spa tsara indrindra any Taipei, Taiwan
Qatar Airways voalohany nanatevin-daharana ny IATA CO2NNECT...